Uyazethemba embonini egcwele amadoda | Isolezwe
Uyazethemba embonini egcwele amadoda
Izindaba / 7 August 2018, 11:59am / PHILI MJOLI
UNKSZ Yolisa Kani, oyinhloko yemigomo yomphakathi kwa-Uber SA, uthe akakwesabi ukukhuluma phambi kwamadoda okuyiwo amaningi emkhakheni wezokuthutha Isithombe: SithuNyelwe
UKUBE ezokuthutha umphakathi zazihlelwa ngowesifazane ngabe kuningi okwenziwe ngendlela eyehlukile.
Lokhu kushiwo nguNksz Yolisa Kani oyinhloko yemigomo yomphakathi kwa-Uber SA.
Uthe kusukela emabhasini, ematekisini, ezitimeleni nasemarenki kuningi othi uma ukubukisisa ubone ukuthi umuntu wesifazane wayengeyona ingxenye yokuhlela.
“Uma ubheka izitebhisi eziphakeme zebhasi, zazingahlelwanga ukuthi kuzoba nomuntu wesifazane ogqoka izinhlobonhlobo zeziketi ozogibela. Ukube kwakunjalo zazingeke ziphakame kangaka futhi kwakuzokwaziwa ukuthi umuntu wesifazane ngaphandle kokugqoka kwakhe uzobe ephethe imithwalo, kumele lezi zitebhisi zimvumele ukuthi agibele aphinde ehle ngokukhululeka.
Uqhube wathi owesifazane ukube wayeyingxeye yabahlela ezokuthutha wayezoqaphela ukuthi kungenzeka kube nowesifazane ozithwele ongaxinwa wumchamo noma kuwuhambo olufushane. “Angisayiphathi eyasemarenki, awakhanyi kahle ebusuku, amathoyilethi ayavalwa ebusuku, amadoda ayakwazi ukuncika ngezindonga achame, owesifazane wenzenjani uma eficwa yisimo esifanayo?” kubuza uNksz Kani.
Le ntokazi ithe ayikwesabi ukungena phakathi kwesiqhoqho samadoda ikhulume ngomsebenzi wayo futhi ayinqeni ukuhlela umhlangano nawo uma kunesidingo.
“Ngike ngasebenzela inkampani eyayinikezwe umsebenzi wokuthi ihlanganise ulwazi lwezokuthutha kuMasipala uThungulu (osekuyiKing Cetshwayo). Umsebenzi wethu wawuhlanganisa ukubala amatekisi asebenza kulo masipala. Ngangivuka kusempondo zankomo, ukuze ngibone ukuthi kusetshenzwa kanjani. Kwakuke kushube, abamatekisi bengaqondi ukuthi siwabalelani amatekisi. Umbuzo ababewubuza ukuthi uthunywe ngubani, ngiphendule, bavele bathi hamba-ke uyobala amatekisi akhe. Kwangithatha amasonto amabili ukuhamba ngichaza ngokuthi senzani, ngafunda lapho ukuthi abantu bamatekisi badinga ukuthi bakuthembe ukuze kube lula ukusebenza nabo,” kusho uNksz Kani.
Lolu lwazi aluthola ngaleso sikhathi uthi luyamsiza uma kubheduka izinkinga phakathi kwabamatekisi no-Uber.
“Bekumele ngenze indlela yokuthi siqonde ukuthi sizosebenza kanjani, thina sazi ubuchwepheshe, bona umsebenzi bawazi ngaphezulu kwethu. Okunye okumele ukuthi sikwazi ukuthi ezobuchwepheshe sezifikile kuleli, “ kusho uNksz Kani.
Uthe nakuba zisekhona izigameko ezingezinhle ezenzekayo kodwa ziya ngokwehla.
UNksz Kani uthe uke waba yiTransport Planner kuMasipala waseGoli ngo-2010 kanti wayephethe uhlelo lokuthutha abantu abaya nabaphuma ezinkundleni zezemidlalo ngesikhathi kunemidlalo yeNdebe yoMhlaba yebhola.
“Angizikhumbuli ngingena enkundleni yezemidlalo ngibuka umdlalo. Ngangisuke ngizobheka ukuthi sekusele isikhathi esingakanani umdlalo uphele, bese ngiyobheka ukuthi ezokuthutha ezihleliwe zimi ngomumo ukubuyisela bonke abasenkundleni ezindaweni abathathwe kuzo. Nganginovalo, abezindaba baphesheya babebike ukuthi ezokuthutha zomphakathi eNingizimu Afrika azikho esimeni. Uma kwakungenzeka kube nokungahambi kahle ngangizoba ngomunye wabantu abazophendula,” kusho uNksz Kani.